माछापुच्छ्रेको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन – Investing Nepal
By: Nepse Direct Aug 20, 2019
Commercial Bank Debentures
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड MBL 0.00 % 240.00 ले साउन ६ गतेदेखि निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको रू. १ अर्व २० करोड बराबरको ऋणपत्र मा आवेदन दिने आज (भदौ ३ गते) अन्तिम दिन हो । बैंकले रू. १ हजार अंकित दरमा १२ लाख कित्ता ऋणपत्र सर्वसाधारणका लागि जारी गरेको हो ।
बैंकले १०.२५ प्रतिशत बार्षिक ब्याजदरमा १० बर्षका लागि ऋणपत्र जारी गरेको हो । ऋणपत्रमा आर्जित ब्याज रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षको प्रथम र दोस्रो अर्धवार्षिक समाप्त भएपश्चात भुक्तानी गर्नेछ । १० वर्षपछि भने साँवा तथा ब्याज एकमुष्ट भुक्तानी गरिने बताइएको छ ।
दरखास्तका लागि न्यूनतम ऋणपत्र २५ कित्ता रहेको छ भने आवेदकले अधिकतम ऋणपत्र ११ लाख ७० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । यस ऋणपत्रको बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
आवेदकले सि आश्वा प्रणालीमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय कम्पनीबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, मेरोसेयरको सफ्टवेयर मार्फत पनि आवेदन दिन सकिने बताइएको छ । बैंकले निष्कासन गरेको ऋणपत्रलाई इक्रा नेपाल लिमिटेडले इक्राएनपि एलए माइनस ग्रेडिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कर्जा जोखिम न्यून रहेको संकेत गर्दछ ।
1025MBLD2085 , MBLPO , MBL